Ny fipoahan'ny COVID-19 dia niteraka ny fanafoanana ny 2020 Kat Show amin'ny maha hetsika ara-batana azy any Las Vegas. Fa kosa, ireo mpivarotra isan-karazany izay tokony hanana fampirantiana sy naseho tamin'ny rafitra fitehirizana nomerika sy rindrambaiko ho an'ny fampiharana haino aman-jery sy fialamboly isan-karazany dia nifindra tamin'ny Virtual Event, nanomboka ny faran'ny volana aprily hatramin'ny volana jona 2020, anisan'izany ny Kat Show Express (nabshow.com/express/).
Manoloana ny firosoana amin'ny asa lavitra ataon'ny matihanina indostrialy maro dia nanjary mifandraika manokana ny fizotran'ny rahona mifototra amin'ny rahona. Ny quarantine amin'izao fotoana izao dia nanafaingana ny fironana amin'ny alàlan'ny rahona miasa rahona, izay mety hitohy na dia afaka miara-miasa indray aza isika. Raha tsy misy ny rahona, ny ankamaroan'ny matihanina M&E dia tsy hanana asa.
Ny fikorianan'ny rahona mifototra amin'ny rahona dia nitombo laza na dia talohan'ny areti-mandringana COVID-19 aza. Tamin'ny HPA Retreat 2020, orinasa lehibe manolotra safidy workflow cloud ary koa talen'ny za-draharaha, dia namorona horonantsary fohy momba ny fizotran'ny rahona mivantana, Ilay Very Lederhosen.
Nandritra ny tatitra fanao isan-taona 2019 momba ny fitahirizam-bola nomerika ao amin'ny fampahalalam-baovao sy fialamboly, dia nanantona ny fitomboan'ny rahona ho fanohanana ny media sy fialamboly aho (jereo eto ambany). Tamin'ny tatitra tamin'ny taona 2020, ny fitomboan'ny fitahirizana rahona dia ho avo kokoa noho ny fitomboan'ny fampiasana taorian'ny nanombohan'ny areti-mifindra, ary miorina amin'io traikefa io, ny fitomboana haingana amin'ny asa lavitra sy ny rahona rahona. Ny areti-mandringana dia nanetsika ny fampiasana rahona.
Ity lahatsoratra ity dia mijery ny fivoarana ho an'ny alàlan'ny rahona miasa rahona, ary indrindra ny vahaolana fitahirizana nomerika hanohanana ireo fizotran'asa ireo. Mariho fa na dia orinasa marobe izay tokony hampiranty tamin'ny NAB 2020 aza no mandray anjara amin'ny hetsika virtoaly dia miparitaka arakaraka ny fandehan'ny fotoana izany hetsika izany, manomboka amin'ny volana aprily ka hatramin'ny jona 2020. Hiresaka amin'ity zavatra hitako tamin'ny fotoana nanoratako ity aho. .
Orinasa M&E maro no nampiasa serivisy AWS ao anatin'izany i Turner, Untold, ny Rock and Roll Hall of Fame, Fox, HBO, Hotstar ary Eurosport. AWS dia iray amin'ireo orinasa 5 nomena mari-pahaizana Engineering EMMY ho an'ny rojom-panomezam-baovao mifototra amin'ny cloud0based for ingning content, management and delivery.
AWS dia manolotra tolotra vaovao telo hanampiana amin'ny asa mavesatra amin'ny haino aman-jery latency. Ireo dia faritra eo an-toerana AWS, Posts an'ny AWS ary ny halavan'ny AWS. Ny faritra eo an-toerana dia manome latency ambany amin'ny alàlan'ny fanakaikezana ireo mpampiasa farany anao misy serivisy AWS. Ny paositra AWS dia mitondra rakotra vokatra AWS ao amin'ny ivon-kevitrao ho an'ny traikefa rahona hybrid eo an-toerana na ao anaty rahona. Ny halavan'ny AWS dia ahafahan'ny mpandrindra fampiharana finday handefa fampiharana misy latsa-bato milimetatra tokana.
AWS dia manolotra toeram-piasana virtoaly ho an'ny Windows na Linux izay misy ny fidirana amin'ny CPUs NVIDIA T4 Tensor Core sy ny toeram-piasana NVIDIA Quadro amin'ny vidiny mitovy. Izy io koa dia manolotra ny fandikana amin'ny AWS na ho toy ny hybrid na rahona ampahibemaso feno amin'ny alàlan'ny AWS Thinkbox Deadline na ny vahaolana momba ny fitantanana tianao. Ny vokatra roa dia atolotra amin'ny fandoavana rehefa mampiasa azy ianao.
Tamin'ny taona 2019 dia nilaza i Fox fa hampiasa AWS ho an'ny tariby sy zanabolana fampielezam-peo mampiasa ny valantserasera AWS amin'ny sasany amin'ireo toeram-pamokarany ary faritra AWS eo an-toerana. Ity sary eto ambany ity dia mampiseho izay mety ho fijerin'ny ho avy amin'ny fampielezam-peo mivantana amin'ny alàlan'ny AWS rehefa mihetsika mankamin'ny rahona ny efitranon'ny famokarana.
Niresaka momba ny fizarana atiny ambany latency ihany koa ny AWS tamin'ny alàlan'ny AWS Elemental MediaStore (tahiry fitahirizana haino aman-jery sy loharano niavian'ny loharano). Ho an'ny NAB 2020 AWS dia nanolotra ny Elemental Live chunked transfer, ny fanohanan'ny DRM ary ny fampidirana Ad amin'ny lafiny mpizara. Nilaza ihany koa ny orinasa fa ny Elemental MediaConvert sy ny Accelerated Transcoding dia afaka manao encoding AV1 sarotra kokoa ankehitriny. Ity sary eto ambany ity dia mampiseho ny fomba ahafahan'ny AWS Elemental MediaLive, boaty fampidinana haino aman-jery eo an-toerana, manome fidirana an-tsary mivantana.
Qumulo dia manome serivisy rakitra rahona fitehirizana sy serivisy serivisy sy serivisy vitsivitsy horonantsary NAB virtoaly. Ny indostria M&E dia iray tamin'ireo Qumulotsena kendrena. Nanambara ny orinasa fa ny Adobe Premiere Pro sy After Effects, miaraka amin'ny QumuloNy serivisin'ny rakitra, ahafahan'ny ekipa mamorona mamorona sy manova rakitsary horonantsary mampiasa fitehirizana rahona miaraka amin'ny haavon'ny fampidirana, fidirana ary ny fampiasa ao amin'ny studio. QumuloNy CloudStudio dia mamela ny tetik'asa mifindra izay voafatotra amin'ny fomba maoderina amin'ny tranokala famokarana ara-batana any amin'ny rahona ho an'ny vahoaka eo amin'ny sehatra AWS sy GCP.
Ao anatin'ny famoahana hevitra momba ny mpandinika Qumulo niresaka bebe kokoa momba ny fomba Qumulo, Adobe sy Teradici dia afaka manome fanonerana rahona hybrid miara-miasa aseho amin'ny sary etsy ambany. Ity fitambarana ity dia afaka nanome scaling tsy manam-petra, fanovana horonantsary fiaraha-miasa avo lenta, effets visuels ary fandikana amin'ny analytics sy fahitana amin'ny alàlan'ny fampiasana Qumulo fitaovana fandalinana.
StorNext 6.4 dia mampiditra zavatra milazalaza tena mba hahatonga ny votoatin'ny rahona ho mora azo kokoa, ahafahana manao raharaham-barotra hybrid-cloud vaovao. Ny mpanjifa dia manoratra rakitra ao amin'ny rafitry ny rakitra StorNext, avy eo miorina amin'ny politika, ny StorNext dia mandika rakitra any amin'ny rahona ampahibemaso na tsy miankina, miaraka amin'ny safidy hampidirina metadata zavatra fanampiny. Ny mpanjifa tsy-StorN Next ary ny fizotran'ny cloud-resident dia mety mahazo miditra amin'ny zavatra mivantana ankehitriny, mampiasa ilay metadata nitarina vaovao. Ho fanampin'izany, ny storNext 6.4's multi-kofehy put / mahazo asa dia manome fivoarana 5X ka hatramin'ny 7X mihoatra ny asa misy kofehy tokana.
Manao ny azy ihany ny Netapp hetsika NAB virtoaly tamin'ny 2 jona. Ny hetsika ataon'izy ireo dia hampiseho ny vahaolana, miaraka amin'ny mpiara-miasa mba hanolotra ambaratonga vaovao amin'ny fahombiazana sy ny fahombiazany ary hamorona lamba angon-drakitra haino aman-jery izay manohana ny fizotran'ny M&E.
Nanana an'izany koa i Dell Technologies hetsika virtoaly izay nampiseho ny fitaovany compute sy fitehirizana ho an'ny fizotran'ny haino aman-jery sy ny fialamboly ary koa ny fihetsiketsehana miaraka amin'ny Adobe miaraka amin'ny fitehirizana Dell Isilon ho fampandehanana ny onjam-piaraha-miasa. Ny horonantsarin'izy ireo amin'ny fangatahana dia niresaka ny maha-zava-dehibe ny fidirana metadata ary ny manam-pahaizana iray amin'ny Adobe dia niresaka momba ny fomba nanampian'ny Dell Isilon tamin'ny alàlan'ny workflow an'i Adobe's Productions (ampahany amin'ny Premiere). Mariho fa amin'ny taona 2020 ny orinasa dia manana drafitra ho an'ny mpizara Isilon sy sehatra rahona miaraka amin'ny OneFS.N Next. Nilaza ny orinasa tamin'ny volana aprily fa nanantena ny ho afaka hilaza bebe kokoa ao anatin'ny roa volana.
Dell koa dia nanana slide miresaka momba ny paikadin'izy ireo voalohany. Ity dia paikady feno hamindra ny angona misy eo amin'ny rahona, tsy miankina, rahona maro ary rahona ampahibemaso.
Mahavita asa be i Dell amin'ny alàlan'ny workflows amin'ny IP-(SMPTE 2110) miaraka amin'ireo vokatra vokariny. Nandritra ny iray amin'ireo firaketana an-tserasera an-tserasera manam-pahaizana iray avy IABM nanipika fa ny M&E matihanina dia nivadika hampiasa arisiva satria lasa sarotra ny maka sary vaovao miaraka amin'ireo mpisehatra. Miara-miasa amin'i Greymeta i Dell mba hanomezana fidirana mora amin'ny angona voatahiry amin'ny alàlan'ny metadata namboarina AI amin'ny alàlan'ny sehatra Iris. Ity ambany ity dia sary iray avy amin'ny fampisehoana an-tserasera izay fomba fijery avo lenta momba ny sehatra fitehirizana Dell sy ny drafitry ny rindrambaiko.
mazoto nanome loharanom-baovao an-tserasera amin'ny fanaovana asa M&E lavitra. Marquis Broadcast dia manolotra safidy asa lavitra mitambatra mazoto Ny fitahirizana nexis miaraka amin'ny fitehirizana rahona wasabi (ho an'ny backup) ary ny fiaraha-miasa mifandraika amin'izany.
Ny Spectra Logic dia miorina tsara amin'ny indostria M&E amin'ny maha mpamatsy tahiry azy ireo. Ao amin'ny fanolorana NAB virtoaly izy ireo dia mampiseho fampiasana mandroso amin'ny vavahady fitehirizan-dry BlackPearl. BlackPearl no fototry ny rafitry ny fitehirizam-bokin'ny Spectra izay misy ny fifandraisana amin'ny rahona ampahibemaso sy hybrid, fitehirizana toerana marobe ary koa fitehirizan-javatra misy HDD ary fitehirizam-bokim-pirazanana.
Riobroker, natolotry ny NAB 2019 dia motera fampitaovana sy motera fifandraisana. Io dia ahafahana manampy metadata sy fanondroana atiny miaraka amin'ny atiny ary manome motera fifindra-monina mankany Black Voahangy ary fanarenana ampahany amin'ny rakitra. Tafiditra ao anatin'izany ny fivezivezin'ny angona mankany amin'ny rahona ampahibemaso. Ny fampidirana node RioBroker dia azo ampiana mba hampitomboana ny fahafaha-manana sy ny fahafaha-manana toerana misy anarana manerantany. Spectra's StorCycle dia mamela ny fitantanana fanabeazana ny fanananao rehetra tehirizina.
Wasabi dia nanao ny M&E ho iray amin'ireo tsenany mifantoka amin'ny fitehirizan-drakitry ny rahona ambany indrindra an'ny orinasa. Ny orinasa dia miara-miasa amin'ny mpiara-miasa amin'ny fantsona maro hanaterana ny tahiry rahona ho ampahany amin'ny tetikasan'izy ireo. Nilaza ny orinasa fa misy 3rd Fampiharana na lampihazo AWS S3 izay mifanaraka amin'ny antoko dia tokony hiasa amin'ny fitehirizana Wasabi. Nilaza ny orinasa fa fisoratana anarana 200+ no voatanisa ho toy ny Wasabi interoperable araka ny aseho etsy ambany. Nilaza ilay orinasa fa ny fampiasana rafi-drakitra maoderina namboarina miaraka amina teknolojia mitarika fitaovana dia manolotra tahiry exabyte-scale.
Ny orinasa dia manana ambaratonga tokana fitehirizana avo lenta ho an'ny $ 5.99 / TB / mo tsy misy fihenam-bidy ary tsy misy sarany amin'ny antso API. Tamin'ny taona 2020 Wasabi dia nanolotra tahiry fandoavam-bola $ 5.99 isam-bolana na fahafaha-mitahiry voatahirin'ny 50 TB ka hatramin'ny 10 PB amin'ny fampitomboana maharitra mihoatra ny 1,3 na 5 taona miaraka amin'ny fandoavana mialoha. Nilaza ny orinasa fa azo antoka ny fitehirizana azy ary maharitra sy mateza ary misy ary ao koa ny fanarahana ny Motion Picture Association of America.
Wasabi dia manana toeram-piasana miaraka amin'ny 1 Wilshire any LA miaraka amina fitaovana famindrana 100 TB Wasabi Ball ho an'ny fampidirana amina votoaty betsaka kokoa. Ny orinasa dia manana tahiry ihany koa amin'ny morontsiraka atsinanana US ary koa Eropa (Amsterdam) sy Azia (Japon). Ankoatr'izay Wasabi dia misokatra amin'ny fifandraisana 1 sy 10 GbE natokana ho an'ny fitahirizan'izy ireo rahona.
Backblaze, orinasa hafa mitahiry rahona miroborobo mikendry ny habaka M&E, dia nanambara fa manohana ny ekosistema S3 be izao miaraka amin'ny famoahana ireo API S3 Compatible vaovao.
Midika izany fa ny mpamorona atiny dia afaka mifindra mora foana amin'ireo mpivarotra fitahirizana rahona hafa mankany Backblaze fitehirizana rahona B2 tsy lafo kokoa. Ny fanombohana BackBlaze dia tohanan'ny IBM Aspera ho an'ny famindrana angon-drakitra haingana sy ny fivezivezena manerana ny halavirana sy atsangana hitondra miasa miaraka amin'ny Backblaze amin'ny fakana sary, famoronana ary fizarana atiny nomerika. Vao tsy ela akory izay i Backblaze dia nilaza fa manana tahiry Exabyte mihoatra ny rahona izy ireo.
Object Matrix dia manome fitehirizana zavatra ho an'ny fampiharana haino aman-jery sy fialamboly. Nilaza ny orinasa fa "Object Matrix dia mifantoka amin'ny fanomezana vahaolana ahafahan'ny ekipa mpamorona sy mpamorona manompo irery miditra amin'ny atiny avy amin'ny asa na lavitra na avy aiza." Mampiroborobo ny fahazoana miasa irery amin'ny atiny avy amin'ny arisiva an-tserasera mba hanampy amin'ny alàlan'ny fiasa M&E lavitra sy ny fiaraha-miasa.
Editshare nampandeha maimaimpoana hatramin'ny sehatry ny fitantanana ny haino aman-jery lavitra ny Flowst mba hanampiana ireo matihanina mpamorona miasa ao an-trano. Ny orinasa dia nifantoka betsaka tamin'ny fanomezana làlana mankany amin'ny famokarana horonantsary amin'ny rahona amin'ny 2020 NAB. Anisan'izany ny teknolojia EFS sy Flow vaovao hanohanana ny famokarana farany amin'ny rahona miaraka amina fampidirana lalindalina kokoa amin'ireo fitaovana famoronana toa ny Adobe Premiere Pro ho an'ny fizotran'asa iarahana sy fampiharana azo ampiharina AI mba hampanan-karena ireo arisiva. EFSv dia sehatra vaovao manolotra fanitsiana sy fitahirizana horonantsary virtoaly izay lazain'ny orinasa fa manampy ny mpanjifa hamindra amin'ny laoniny avy amin'ny onjam-peo eny ifotony mankany amin'ny dalam-pamokarana lavitra amin'ny rahona.
Nilaza ny orinasa fa "herin'ny EFS 2020 haingana kokoa EditShare teboka fitehirizana sy tambajotra eo an-toerana, ao amin'ny rahona sy ny fikirakirana hybrid. Mifanaraka tanteraka amin'ny Flow 2020, ny EFS 2020 dia ahafahan'ny fikambanan'ny haino aman-jery manangana onjam-piaraha-miasa marobe, miaro ny mpiasan'ny famoronana amin'ny fahasarotan'ny teknika ao anatiny ary manome ekipa teknika amina fitaovana fitantanana haino aman-jery feno. "
Orinasa maro samihafa no nanolotra tolotra mifandraika amin'ny rahona ao anatiny Masstech manolotra fanampiana amin'ny fampidirana ny fitehirizana rahona ao anaty workflows sy fanamorana ny fanovana lavitra. Nilaza ny orinasa fa ity vokatra ity dia ahafahana manova lavitra amin'ny alàlan'ny fitaovana iray ao anaty fitaovana iray ho an'ny alàlan'ny famokarana horonantsary kely sy salantsalany ary lehibe.
Ny areti-mandoza COVID dia nanafaingana ny fironana amin'ny haino aman-jery lavitra sy ny fizotry ny fialamboly, miaraka amin'ny fiaraha-miasa lavitra mitazona ireo matihanina M&E sy ny mpampiasa azy ao anaty orinasa. Ny vokatra fitehirizana eo an-toerana dia tsy hiala fa misy filàna bebe kokoa hizara sy hamakafaka ny atiny mba hahafahan'ny fikirakirana lavitra. Ny fitaovana mifototra amin'ny rahona dia ho lasa ampahany manan-danja amin'ny tetik'asa haino aman-jery ho avy, mampitombo ny fampiasana tahiry hybrid sy rahona ampahibemaso.